Dhiichisa – DINAGDDEE.COM
Published by Ayele Gelan on 2019-09-09 2019-09-09
Dur ilmii Oromoo – yoo lolatuu,
Shimala qaqee – waaliin dhayee yoo qolatuu!
Lola shaakaluu – dhiichiisaa,
Booree galee kaasani – garaa wal boreesaa!
Waraanaa yoo qophaawuu,
Guyyaa giitiif – yoo si’aawuu!
Yoo harqqaa geerraru – diina kokkee qaabuuf hudhee,
Akkas jedha turee – wal jelaa fuudhee!
“Ya hiriyee sii abadadhuu?”
‘Karaa kee eeggadhu – karaa koo nan badadiinii!!’
Akkas jedhe yoo caraanuu – asi achii utaalee,
Hunduu goota turee – kan mu’atuu lolee,
Wal abdachuutu turee – shakii malee!
Amma garuu – geeddarameera barrisaa,
Dhalfaatu akka jagnatti geerraree roorissaa!
Abdii sobaa – gad xinniqsaa,
Qabsoo kara irra dabsa,
Saba gurmaayee bittinneesa,
Qeeroof foolee dagachiisa!
Akka abbootiin – dur jedhan,
Kan darbee – hin darbattan,
Eeboo darbbattani – jinfuu hin qabatan!
Kanaafuu yaa qeeroo – itti muddii dhiichisa,
Garu hin dagatiin – wayee naamusa!
Ilbiissottatu – si bukkee babarrisaa,
Akeekkedhuu, addaan baasii – tisiisaa fi kanniisaa!
Categories:	Afan Oromo